Zụta ndị na-ekiri Twitch - AudienceGain Ltd.
Uru ịzụrụ ndị na-ekiri Twitch
Melite Channel Channel
Zụlite chanel chanel gị
Enweghị Mbanye Banyere
M ga-erite uru site na ịzụ ndị na-ekiri Twitch?
Ee n'ezie. Inwe nnukwu ndị na-ekiri ihe na ntanetị na-egosi na ọdịnaya gị dị na ogo dị elu ma mee ka ndị ọrụ ndị ọzọ lelee iyi ndụ ahụ.
Enwere m ike ịmachibido iwu maka ịzụrụ Echiche Twitch?
Ọ dịghị ma ọlị. Na AudienceGain, anyị na-eji usoro iwu iji kwalite vidiyo gị ma weta echiche. Yabụ, ọnweghị nsogbu maka ọwa gị.
Ndi m ga-atụfu ndị na-ekiri n'ọdịnihu?
Dịka, a na-eme ka echiche ndị ahụ kwụsie ike. N'ọnọdụ ụfọdụ echiche anyị nyere na vidiyo na-adịghị n'ịntanetị adaala mgbe ahụ anyị ga-mejupụta ya n'efu.
Ahịa afọ ojuju bụ mgbe niile anyị na-ebute ụzọ. Weghachite ozugbo n’ajụghị ihe ọ bụla ma mezue iwu gị n'efu ma ọ bụrụ na elekere elekere enweghị ike mezue ya.